February 2022 ~ Htet Aung Kyaw
Interview with Dr Tint See on Russia-Ukraine War.
12:39 PM Htet Aung Kyaw No comments
အင်အားကြီးနိုင်ငံတခုက နိုင်ငံငယ်တခုအပေါ် လက်နက်အင်အားသုံးပြီး အနိုင်ကျင့် တာကို တော်လှန်ရေးသမားတိုင်းက ဆန့်ကျင်ရမှာဖြစ်ပြီး ဒီတိုက်ပွဲကနေ မြန်မာ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် အကျိုးရှိအောင် လေ့လာသင့်တယ်လို့ နိုင်ငံရေးဝေဖန်ဆန်းစစ်သူ ဒေါက်တာတင့်ဆွေကပြောပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အမြဲတန်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ ရုှရားနိုင်ငံဟာ လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကို လက်မခံပဲ အိမ်နီးချင်း ယူကရိန်းကို လက်နက်အင်အားသုံး ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။
အခု ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့် မေးမြန်းချက်ထဲမှာတော့...
- ရုရှားက ဒီလောက်အထိ ကျုးကျော်တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားပါရဲ့လား...
- UNSC နဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက ဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲ ဒီအတိုင်း ရပ်ကြည့်နေမှာလား...
- ရုရှားရဲ့ အနိုင်ကျင့် ကျုးကျော်မှူကို စစ်ကောင်စီက ဘာကြောင့်ထောက်ခံတာလဲ...
- ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ခုခံစစ်က မြန်မာနွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် အားတက် စရာဖြစ်နိုင်သလား...စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Interview with Banya Khung Aung of KHRG.
7:32 AM Htet Aung Kyaw No comments
ရှမ်း-ကယားနယ်စပ် မိုးဗြဲနဲ့ ဒီမော်ဆိုအကြားရှိ နမ်းမယ်ခုံဒေသမှာ အခုချိန်အထိ တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေတာကြောင့် ဒေသခံတွေ သောင်းနဲ့ချီ ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ ကရင်နီ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က ဗညားခွန်အောင်ကပြောပါတယ်။
ကရင်နီဒေသမှာ သီတင်းတပတ်နီးပါးကြာဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲအခြေအနေ၊ စစ်ပြေးတွေနဲ့ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေကို BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- တိုက်ပွဲ နောက်ဆုံးအခြေအနေ...
- နှစ်ဖက် ထိခိုက်ကျဆုံးမှုအနေအထား...
- ရွာမီးရှို့ခံရလို့ အရပ်သားတွေ ထွက်ပြေးရမှာအခြေအနေ...
- ကူညီကယ်ဆယ်ရေး ဘယ်လိုလုပ်နေကြသလဲ...
- ကရင်နီဒေသအပြင် အခြားဒေသတွေပါ တပြိုင်တည်း တိုက်ပွဲဖေါ်နိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(အင်တာဗျုးလုပ်နေစဉ် အင်တာနက်လိုင်း ပြတ်ကျသွားတဲ့အတွက် တယ်လီဖုန်းနဲ့မေးပြီး ပြန်ပေါင်းထားရတာကြောင့် ကြည့်ရှု-နားဆင်တဲ့အခါ အဆင်မပြေဖြစ်ပါက နားလည်ပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါတယ်)။
Interview with Col Naw Bu of KIA. part-2
5:19 AM Htet Aung Kyaw No comments
“စစ်ကောင်စီရဲ့ ဖိနှိပ်မှုဒဏ်ကိုကြောက်ရွံ့မသွားပဲ တော်လှန်ရေးကို အရှိန်မြှင့်ဖို့ လိုပါတယ်”
(ဗိုလ်မှုးကြီးနော်ဘူ- KIO/KIA ပြန်ကြားရေးအရာရှိ)
အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုတပ်တွေဟာ ရှေ့တန်းက တော်လှန်ရေးသမားတွေကို ရင်ဆိုင်မတိုက်ပဲ ရွာမီးရှို့တာ၊ လက်နက်ကြီးနဲ့ ရွာထဲပစ်တာကို အဓိကထားလုပ်လာနေပြီး လူထုကို ကြောက်သွားအောင် လုပ်နေတယ်၊ ဒါပေမယ့် လူထုက မကြောက်သွားပဲ ခုခံတော်လှန်လိုစိတ် ပိုပြင်းလာနေတာကိုသာတွေ့ရတယ်လို့ KIO/KIA ပြန်ကြားရေးအရာရှိ ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူက ပြောပါတယ်။
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး တနှစ်တာကာလအတွင်း KIA ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်နဲ့ PDF ပြည့်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ၊ တနှစ်တာအတွင်း လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးရဲ့ တိုးတက်မှု အနေအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ နေရာအများစုကို တော်လှန်ရေးတပ်တွေက ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလား...
- အရင် ၈၈ ကာလနဲ့ အခု ၂၀၂၂ ကာလ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ အခြေအနေ ဘယ်လိုတိုး တက်ပြောင်းလဲမှုရှိသလဲ...
- တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ရပ်တည်ချက်က ဘယ်လိုရှိသလဲ...
- စစ်ကောင်စီရဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေ ကြမ်းလာလို့ လူထုတွေ ကြောက်ရွံ့သွားနိုင်သလား... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Interview with Col Naw Bu of KIA. Part-1
5:06 AM Htet Aung Kyaw No comments
“စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးလိုလားတဲ့ အဖွဲ့အားလုံးနဲ့ လက်တွဲပြီး တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်”
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖြုတ်ချပြီး ဖက်ဒရယ်-ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုထူထောင်ဖို့ လိုလားတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့ KIO/KIA ပြန်ကြားရေးအရာရှိ ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူက ပြောပါတယ်။
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး တနှစ်တာကာလအတွင်း KIA ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်နဲ့ PDF ပြည့်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြား၊ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ EAO တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု အနေအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- စစ်ကောင်စီက ဦးစီးကျင်းပတဲ့ နေပြည်တော်က ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားကို KIO က ဘာကြောင့်မတက်တာလဲ...
- NUG က ဦးစီးကျင်းတဲ့ ပင်လုံစာချုပ် ၇၅ နှစ်ပြည့်နေ့ အခမ်းအနားကို KIO က တက်ရောက်ခြင်းက ဘယ်လို သတင်းစကား ပါးချင်လို့လဲ...
- NUG နဲ့ KIO ကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုက ဘယ်လိုအနေအထားရှိသလဲ...
- ကချင်ပြည်နယ်မှာ KIA နဲ့ PDF တွေကြား ပူူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်မှုက ဘယ်အနေအထားရောက်နေပြီလဲ...
- တနှစ်တာ တိုက်ပွဲကာလအတွင်း စကစ ဖက်က ထိခိုက်-ကျဆုံး-ထွက်ပြေး အတော်များနေပြီလား... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(လူထုထောင်ခံမှုအားကောင်းတဲ့ တော်လှန်ရေးဟာ အောင်ကိုအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်ပါဝင်တဲ့ ဒုတိယ ပိုင်းကိုတော့ မနက်ဖန်ညမှာ ဆက်လက်ထုတ် လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်)။
Interview with Salai Thet Ni of CNF. Part-2
“ဘုရင့်နောင်ဖောင်ဖျက်စိတ်ဓတ်နဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့လိုပါတယ်”
ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆင်နွဲနေတဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးဟာ စစ်အာဏာရှင် ဖြုတ်ချရေးအတွက် နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တာကြောင့် လုံးဝနောက်မဆုတ်ပဲ ဘုရင့်နောင်ဖောင်ဖျက် စိတ်ဓတ်နဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့လိုတယ်လို့ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဆလိုင်းထက်နီကပြောပါတယ်။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး တနှစ်ကြာကာလအတွင်း ချင်းပြည်နယ်က တော်လှန်ရေးအခြေအနေအပါဝင် နွေဦးတော်လှန်ရေးအပေါ်အမြင်ကို BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- ချင်းပြည်နယ်က စစ်ပြေးဒုက္ခသည်အခြေအနေ...
- အိန္ဒိယ အစိုးရရဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီ...
- EAO နဲ့ PDF တွေကြား ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှု အနေအထား...
- ၈ လေးလုံးကာလနဲ့ ဒီနေ့ တော်လှန်ရေးကာလ အခြေအနေ တူညီချက်- မတူညီချက်...
- တနှစ်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာ တော်လှန်ရေးအရှိန်အဟုန် ဘယ်လောက်ကောင်းနေပြီလဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(အင်တာဗျုးလုပ်နေစဉ် အင်တာနက်လိုင်း မကောင်းတဲ့အတွက် အသံနဲ့အရုပ် မကြည်မလင်ဖြစ်နေတာကို တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။ မနက်ဖန်ညမှာတော့ KIO/KIA ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ မေးမြန်းချက်ကို ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်)။
Interview with Salai Thet Ni of CNF. Part-1
2:43 AM Htet Aung Kyaw No comments
နွေဦးတော်လှန်ရေး တနှစ်တာ တိုက်ပွဲကာလအတွင်း ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ ၇၅% ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေက ထိန်းချုပ်ထားပြီး စစ်ကောင်စီတပ်တွေက မြို့တွင်းနဲ့ ကားလမ်းမကြီးတလျောက်မှာသာ ကျန်တော့တယ်လို့ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဆလိုင်းထက်နီကပြောပါတယ်။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး တနှစ်ကြာကာလအတွင်း ချင်းပြည်နယ်က နွေဦးတော်လှန်ရေးအခြေအနေအပေါ် BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- NCA အပစ်ရပ်စာချုပ်အပေါ် CNF က ဘယ်လိုသဘောထားသလဲ...
- NUCC မှာ CNF က ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသလဲ...
- ချင်းပြည်နယ်ရှိ CDF ဒေသခံချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ CNF ကြားမှာ ဘယ်လို ပူးပေါင်း တိုက်ပွဲဝင်နေသလဲ..
- ချင်း၊ မကွေး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းတွေမှာ တော်လှန်ရေးတပ်တွေ ဘယ်လို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေသလဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးအတွက် ဘုရင့်နောင်ဖောက်ဖျက်စိတ်ဓတ်နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုကြောင်း ဆွေးချက်ပါတဲ့ ဒုတိယ ပိုင်းကိုတော့ မနက်ဖန်ညမှာ ဆက်လက် ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်)။
Interview with Aung Thu Nyein on ASEAN meeting.
အာဆီယံ အစည်းဝေး ဘာတွေ ထူးခြားမလဲ... ဦးအောင်သူငြိမ်းနှင့် မေးမြန်းချက်
- အာဆီယံ အစည်းဝေးကို စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ် ဘာကြောင့် တက်ခွင့်မရသေးတာလဲ...
- အာဆီယံ သဘောတူချက် ၅ ခုကို စစ်ကောင်စီက လိုက်နာဖွယ်ရှိသေးသလား...
- အာဆီယံ အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေ နေပြည်တော် သွားခွင့်ရလာနိုင်သလား...
- အာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ ကြားဝင်ဆွေးနွေးမှုကြန့်ကြာလေ- စစ်ရေးအရ တိုက်ပွဲတွေက ပိုပြင်းထန်လေ ဖြစ်လာမလား... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။. ။
Interview with Padoh Saw Taw Nee of KNU. Part-2
NUCC တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းနိုင်တာ၊ EAO တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်တွေကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တာ၊ နိုင်ငံရဲ့ဒေသအတော်များများမှာ တော်လှန်မှုတွေ အရှိန်ကောင်းလာနေတာတွေကြောင့် နွေဦးတော်လှန်ရေးဟာ ဒီနှစ်အတွင်း ခုခံစစ်ကနေ ထိုးစစ်ဆီ တက်လာနိင်မှာ သေချာတယ်လို့ KNU ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ပဒိုစောတောနီးကပြောပါတယ်။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး တနှစ်ကြာကာလအတွင်း EAO တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်တွေကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေ၊ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ စစ်ဆင်ရေးလုပ်နိုင်မယ့် အလားအလာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- လက်ရှိ လက်နက်အင်အားနဲ့ မြို့သိမ်း၊ ရွာသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နိုင်ပါ့မလား...
- ထိုင်းနဲ့ အားဆီယံက နွေဦးတော်လှန်ရေးအပေါ် ဘယ်လိုသဘောထားသလဲ...
- ၁၉၈၈ နဲ့ ဒီနေ့တော်လှန်ရေးအခြေအနေ ဘာတွေတူပြီး ဘာတွေ ကွားခြားသွားသလဲ...
- ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ဖို့ စိတ်ပိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်း ပြည့်စုံနေပြီလား... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Interview with Padoh Saw Taw Nee of KNU. part-1
1:23 AM Htet Aung Kyaw No comments
ပြသာနာတွေကို အကြမ်းနည်းနဲ့မဖြေရှင်းပဲ နိုင်ငံရေးနည်းအရဆွေးနွေးအဖြေရှာရမယ်ဆိုတဲ့ NCA မူကို စစ်တပ်ဖက်က ချိုးဖောက်ပြီး အကြမ်းဖက် အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက ဒီစာချုပ်ပါ သဘောတူညီချက်တွေဟာ ပျက်ပျယ်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ ကရင့်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ပဒိုစောတောနီးကပြောပါတယ်။
မနက်ဖန်ကျင်းပမယ့် ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းနားဆီတက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးကြဖို့ စစ်ကောင်စီရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အပေါ် သဘောထားအပါဝင် လက်ရှိ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU သဘောထားကို BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- စစ်ကောင်စီဖက်က ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို KNU က ဘာကြောင့် လက်မခံတာလဲ...
- NCA သဘောတူညီချက် ပျက်သွားပြီလား...
- KNLA တပ်မဟာ ၇ ခုစလုံးမှာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီလား...
- KNU နဲ့ NUG ကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုက ဘယ်အနေအထားထိ ရောက်နေပြီလဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(EAO တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်တွေပူးပေါင်းပြီး ခုခံစစ်ကနေ ထိုးစစ်ကိုချီတက်မယ့် နွေဦးတော်လှန်ရေး အရှိန်အဟုန်အကြောင်း ဆွေးနွေးချက်ပါဝင်တဲ့ ဒုတိယပိုင်းကိုတော့ မနက်ဖန် စနေညမှာ ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်)။
Intro for KNU Interview.
8:49 AM Htet Aung Kyaw No comments
“ဒီအချိန်ဒီအခါမှာ NCA ဆိုတဲ့စကားကို ကျနော်တို့ ကြားကို မကြားချင်တော့ဘူး”
စစ်ကောင်စီဖက်က ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ အတုအယောင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို ငြင်းပယ်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူ တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ကရင့်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ပဒိုစောတောနီးကပြောပါတယ်။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး တနှစ်ကြာအခြေအနေ၊ နွေဦးတော်လှန်ရေး တနှစ်တာကာလ အတွင်း KNU အပါဝင် EAO တွေနဲ့ NUG, PDF တွေကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေနေအပေါ် BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
ဒီမေးမြန်းချက် အပြည့်အစုံကိုတော့ သောကြာနဲ့ စနေညတွေမှာ ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Interview with Than Soe Naing. part-2
“လူထုအပေါ် ပိုရက်စက်လေ၊ စစ်ကောင်စီရဲ့ ကျဆုံးခန်း ပိုနီးလာလေပါပဲ”
စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ ရွာမီးရှို့၊ ပစ္စည်းလုတာအပါဝင် ရက်စက်စွာဖိနှိပ်မှုတွေဟာ လူထုကိုကြောက်ရွံ့သွားစေမှာမဟုတ်ပဲ နာကြည်းမှူကိုသာဖြစ်စေပြီး ပိုပြင်းထန်တဲ့ တော်လှန်ပုန်ကန်မှုကို ရင်ဆိုင်လာရဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ နိုင်ငံရေးဆန်းစစ်ဝေဖန်သူ ဦးသန်းစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းမှုတနှစ်ပြည့်အခြေအနေ တနည်းအားဖြင့် နွေဦးတော်လှန်ရေး တနှစ်ပြည့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- တနှစ်တာကာလအတွင်း PDF တပ်တွေနဲ့ EAO တပ်တွေကြား ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်မှု ဘယ်လောက်အထိ တိုးတက်လာသလဲ...
- ရွာမီးရှို့၊ ပစ္စည်းလုမှုတွေက လူထုကို ပိုကြောက်သွားစေနိုင်သလား...
- လက်ရှိစစ်ပွဲကို အာဆီယံက ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးနိုင်ခြေ ရှိသေးရဲ့လား.... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Interview with Than Soe Naing. Part-1
4:34 AM Htet Aung Kyaw No comments
“ဒီအရှိန်တိုင်း ဆက်သွားနိုင်ရင် စစ်ရေးဆိုင်ရာ ချိန်ခွင်ညှာ အလှည့်အပြောင်းတခု မကြာခင်မှာ ရောက်လာနိုင်ပါတယ်”
PDF တပ်တွေနဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်နေသူတွေက လက်ရှိ တိုက်ပွဲအရှိန်ကို တဖြေးဖြေးတင်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင် မကြာခင် လပိုင်းအတွင်း စစ်ရေးဆိုင်ရာ ချိန်ခွင်ညှာအလှည့်ပြောင်းတခုဆီ ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံရေးဆန်းစစ်ဝေဖန်သူ ဦးသန်းစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်။
- နွေဦးတော်လှန်ရေး တနှစ်တာအတွင်း ဘယ်လောက်အထိ တိုးတက်လာသလဲ...
- လက်မပြည့်စုံပဲနဲ့ မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွဲရေးဆိုတာ တကယ်ဖြစ်လာနိုင်ရဲ့လား...
- မြို့နယ်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့ PDF တပ်တွေအားလုံးဆီကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်စီးဆင်းနေပြီလား... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ ရက်စက်ဖိနှိပ်မှုတွေက ပြည်သူတွေကို ကြောက်သွားစေသလား- တော်လှန်စိတ်ပိုပြင်းထန်လာစေသလားဆိုတဲ့ အကြောင်း ဆွေးနွေးထားတဲ့ ဒုတိယပိုင်းကိုတော့ မနက်ဖန်ညမှာ ဆက်လက် ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်)။
Interview with Bo Nagar of MRDA. Part-2
4:41 AM Htet Aung Kyaw No comments
(၆ /၂ /၂၀၂၂)
စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ ရွာမီးရှို့၊ ပစ္စည်းသိမ်း၊ လူနှိပ်စက် စီမံကိန်းကို အစပိုင်းမှာ လူထုက ကြောက်သွားပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ စိတ်နာတဲ့ဖက်ကိုပြောင်းသွားပြီး တော်လှန်ရေးထဲ လူထုပါဝင်မှုကို ပိုများလာစေတယ်လို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းအခြေစိုက် PDF တပ်မှူးတဦးဖြစ်သူ ဗိုလ်နဂါးကပြောပါတယ်။
အာဏာသိမ်းနှစ်ပတ်လည်မှာ စစ်ကောင်စီတပ်တွေက စစ်ကိုင်းတိုင်းနဲ့ မကွေးတိုင်းတွင်းက ကျေးရွာတွေကို ဆက်တိုက် မီးရှို့၊ ဖျက်ဆီး၊ လုရက်လုပ်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- စကစ တပ်တွေရဲ့ ရွာမီးရှို့ ဖျက်ဆီးမှုက ဘယ်လောက်အထိ ဆိုးနေသလဲ...
- လူထုကကြောက်သွားသလား... ပြန်တော်လှန်နေသလား...
- NUG နဲ့ EAO တွေရဲ့ ထောက်ခံအားပေးမှုက ဘယ်လောက်အထိ အားကောင်းနေပြီလဲ...
- လက်နက်အင်အားကောင်းလှတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို ဗိုလ်နဂါးတို့လို လူငယ်အဖွဲ့ငယ်တွေက ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်အနိုင်ယူနိုင်မှာလဲ... စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(လာမယ့် အင်္ဂါ- ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေမှာတော့ နိုင်ငံရေးဝေဖန်ဆန်းစစ်သူ ဦးသန်းစိုးနိုင်ရဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးတနှစ်တာ သုံးသပ်ချက်ကို ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်)။
Interview with Bo Nagar of MRDA. part-1
“ရွာမီးရှို့တာ၊ ပြည်သူအပေါ် ရက်စက်ရုတ်မာတာကလွဲရင် စကစ မှာ ဘာဗျုဟာမှ မရှိဘူး”
- တနှစ်တာကာလအတွင်း နိုင်ငံရေးအရ တိုးတက်မှု ဘာတွေရှိလာသလဲ...
- PDF တွေဖက်မှာ လူအင်အား၊ လက်နက်အင်အား ဘယ်လောက်အထိ တိုးတက်လာသလဲ...
- စစ်ကောင်စီက ဘယ်လိုဗျုဟာတွေနဲ့ PDF တွေကို တိုက်ခိုက်နေသလဲ... စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Interview with Capt Nyi Thuta of PSPT. part-2
“ထွက်ပြေးလာသူနဲ့ ကျဆုံးသူဦးရေက တဖြေးဖြေးတိုးလာနေတဲ့အတွက် ဒီဖက်က စစ်ရှိန်သာမြှင့်လိုက်ရင် စကစ ဖက်က တောင့်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး”
(ဗိုလ်ကြီး ညီသုတ- People Soldiers' Production Team- PSPT).
အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီကို မကျေနပ်လို့ တပ်ထဲကနေ ထွက်ပြေးသူ ၃၀၀၀ ကျော်နဲ့ တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးသူ ၃၀၀၀ ဝန်းကျင်အထိရှိလာနေတဲ့အတွက် တော်လှန်ရေးတပ်တွေဖက်က စစ်ရှိန်ကိုသာမြှင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် စကစ ဖက်က ရေရှည်တောင့်ခံခြေ မရှိဘူးလို့ CDM ဗိုလ်ကြီး ညီသုတကပြောပါတယ်။
အာဏာသိမ်းနှစ်ပတ်လည် သို့မဟုတ် နွေဦးတော်လှန်ရေးတနှစ်တာအတွင်း စကစ တပ်တွင်း ဖွဲ့စည်းပုံပျက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- NUG ကပြောနေတဲ့ မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆိုတာ ဒီနှစ်ထဲမှာ တကယ်ဖြစ်လာနိုင်သလား...
- စကစ တပ်အတွင်း ထွက်ပြေး-ကျဆုံး အင်အား ဘယ်လောက်အထိများနေပြီလဲ...
- စကစ ဖက်က အစုအပြုံလိုက် ထွက်ပြေးလာရင် ကြိုဆိုဖို့ တော်လှန်ရေးတပ်တွေဖက်က အဆင်သင့်ပြင်ထားပြီးပြီလား...
- လက်နက်အင်အားကောင်းပြီး နှစ် ၇၀ တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ စကစ တပ်ကို PDF, EAO တပ်တွေက အနိုင်တိုက်မယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသလဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Interview with Capt Nyi Thuta of PSPT. part-1
2:09 AM Htet Aung Kyaw No comments
“ပြည်သူမပါတဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဟာ ဘယ်လိုမှ ရေရှည်မရပ်တည်နိုင်ပါဘူး”
အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီတပ်ကို ပြည်သူတရပ်လုံးက လုံး၀ လက်မခံတော့တဲ့အတွက် ဒီတပ်ဟာ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကနေ ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးဖက် ကူးပြောင်းလာတဲ့ CDM ဗိုလ်ကြီး ညီသုတကပြောပါတယ်။
အာဏာသိမ်းနှစ်ပတ်လည် သို့မဟုတ် နွေဦးတော်လှန်ရေးတနှစ်တာအတွင်း တိုးတက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့က တပ်မတော်အတွင်း ထူးခြားချက်များ...
- တနှစ်ကြာပြီးတဲ့အခါ တပ်မတော်အပေါ် လူထုရဲ့ မုန်းတီးမှုက ပိုတိုးလာသလား...
- လက်နက်အင်အားကောင်းလှတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်ကို လူထုအားသက်သက်နဲ့ အနိုင်ယူဖြိုချနိုင်ပါ့မလား... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအရင်လုပ်သင့်သလား... မြို့မသိမ်းပဲနဲ့ တော်လှန်ရေးဖက်ကနေ အုပ်ချုပ်ရေးချသွားလို့ရသား...ဆိုတဲ့ ဆွေးနွေးချက်ပါဝင်တဲ့ ဒုတိယ ပိုင်းကိုတော့ မနက်ဖန်ညမှာ ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။)။
9:30 AM Htet Aung Kyaw No comments
(၁) ဗိုလ်နဂါးနှင့် အင်တာဗျုး
စစ်အာဏာသိမ်းမှု တနှစ်ပြည့် သို့မဟုတ် နွေဦးတော်လှန်ရေးတနှစ်ပြည့် သုံးသပ်ချက်တခုခု ရေးမလားဆိုပြီး စဉ်းစားတော့ ဗိုလ်နဂါးနဲ့ အင်တာဗျုးထားတာ၊ ဗိုလ်နဂါးတို့ နယ်မြေရဲ့ ထူးခြားချက်တွေကို သတိရမိပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း BNN (Burma News Network) ကနေ ဗိုလ်နဂါးနှင့် အင်တာဗျုးကို ထုတ်လွှင့်တော့ လုံခြုံရေးအရ မမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းတွေမေးတယ်။ အင်အားတွေ၊ လက်နက်တွေကို မမေးသင့်ဘူးလို့ ပရိသတ်အချို့က ဝေဖန်ကြပါတယ်။
ဗိုလ်နဂါးလုံခြုံရေးအတွက် စိတ်ပူလို့ပြောကြတယ်လို့ နားလည်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူပြောသွားတဲ့ ရေဘူယျ အင်အားနဲ့ ရေဘူယျလက်နက်အမျိုးအစားတွေဟာ အသစ်အဆန်း မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးသိပြီးသားအချက်တွေပါ။ FB ပေါ်မှာ တင်ထားပြီးသား အချက်တွေသာဖြစ်ပါတယ်။
လေယာဉ်ပစ် လက်နက်တွေ လိုနေတယ်ဆိုတာ PDF အဖွဲ့တွေ အားလုံးက ပေါ်တင် တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့ အဖြေ မပါပါဘူး။ NUG နဲ့ မဟာမိတ်တွေဖက်က လက်နက်ကူညီမှုတွေပေးနေပြီဆိုတာကလည်း တရားဝင်ထုတ်မပြောထားသေးပေမယ့် အားလုံးခန့်မှန်း နိုင်တဲ့အချက်ပါ။
တပ်တည်နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်းက ယင်းမာပင်၊ ပုလဲ၊ မကွေးအစပ်က မြိုင်၊ ပြီးတော့ ထီးလင်း၊ ဂန့်ကော၊ ကလေးနဲ့ ချင်းပြည်နယ်တကျော ဆက်စပ်နေတဲ့ နယ်မြေတွေဆိုတာ တရားဝင်ထုတ်မပြောလည်း မြေပုံကြည့်မှန်းလို့ရပါတယ်။
ဒီနယ်မြေရဲ့ အောက်ဖက်မှာ မကွေးနဲ့ မန်းတလေး၊ အပေါ်ဖက်မှာ ကချင်ပြည်နယ်ရှိနေတာလည်း လူတိုင်းသိပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီအင်တာဗျုးဟာ လုံခြုံရေးအတွက် ဘာမှ ထိခိုက်မှုမရှိဘူး။ အားလုံး သိပြီးသားအချက်တွေသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနယ်မြေတကျောကို တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက အချိတ်အဆက်ရှိရှိနဲ့ထိန်းထားနိုင်ပြီမို့ စစ်ကောင်စီတပ်က ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ မလွယ်တော့ဘူူး။ ပထမ ပိုင်း စစ်ရေးအတွေ့အကြုံမရှိခင်က ဗိုလ်နဂါးနဲ့အဖွဲ့အပါဝင် အချို့တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းဆီးဖို့ စကစ ကကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အခု အဲလို ထပ်လုပ်ဖို့မလွယ်တော့ပါဘူး။ တော်လှန်ရေးသမားတွေမှာ စစ်ရေးအတွေ့အကြုံအတော်ရသွားပြီမို့ ဒေသတွင်းမှာ လှည့်လည်လှုပ်ရှားနိုင်နေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။
(၂) အသစ်အဆန်းက ဘာလဲ...
အသစ်အဆန်း ဘာတွေပါလဲဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့အတွက် နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ပေါ်လစီချမှတ်နေသူတွေ၊ NUG, NUCC, EAO, CSO တွေက တာဝန်ရှိသူတွေ ဒီအင်တာဗျုးကို အသေချာနားထောင်သင့်ပါတယ်။
တနိုင်ငံလုံးမှာ မြိုနယ် ၃၃၀ သာရှိပေမယ့် PDF က ၄၀၀ ကျော်ရှိနေတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ဘာကြောင့် ဗိုလ်နဂါးတို့နယ်မြေကိုမှ ရွေးပြီး ဦးစားပေးကူညီရမှာလဲဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ PDF ၄၀၀ ကျော်ရှိတဲ့အပြင် (ပကဖ) ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်း မြို့နယ်တိုင်းမှာ ရှိနေပါသေးတယ်။
PDF မှာလည်း NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်က အနည်းဆုံး ၂ နှစ်တာဝန်ထမ်းမယ်လို့ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ အစိုးရ အမြဲတန်းတပ် PDF၊ မြို့နယ်တိုင်းလိုလိုမှာ ရှိနေတဲ့ ဒေသခံ LDF ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒီ ၂ မျိုးထဲမှာမပါသေးတဲ့ နောက်ထပ် အဖွဲ့ငယ်လေးတွေလည်း အများကြီးပါ။
ဒီလိုအဖွဲ့များစွာထဲကမှ ဘာကြောင့် ဗိုလ်နဂါးတို့ဒေသကိုမှ ဦးစားပေးထောက်ခံဖို့ ခင်ဗျားက ပြောနေတာလဲ...။
ပထမ တချက်က ဗိုလ်နဂါးဟာ ရိုးသားတယ်လို့ စာရေးသူက မြင်ပါတယ်။ ဘာမှဟန်ဆောင်ထားတာ မရှိပါဘူး။ ဖုံးကွယ်ထားတာ မရှိပါဘူး။ ရိုးရိုးလေးပဲ ဖြေသွားတာပါ။
ဒုတိယ တချက်ကတော့ ဗိုလ်နဂါးတို့ရှိနေတဲ့ နယ်မြေအနေအထားပါ။ ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ချင်းတွင်းမြစ် အနောက်ချမ်း ယင်းမာပင်၊ ပုလဲကနေ မကွေးအစပ်က မြိုင်၊ ပြီးတော့ ထီးလင်း၊ ဂန့်ကော၊ ကလေးနဲ့ ချင်းပြည်နယ်အစပ် (CNF နယ်မြေ)၊ အဲဒီကနေ ဟိုဖက်မှာ ရခိုင်နယ် (AA-နယ်မြေ) ဆက်နေပါတယ်။ တခါ စစ်ကိုင်းအပေါ်မှာ ကချင်ပြည်နယ် (KIA နယ်မြေ) ဆက်နေတဲ့အတွက် ဒီဒေသဟာ ပထဝီအနေအထားအရ အရေးပါလှပါတယ်။
(၃) လွတ်မြေနယ်မြေအသစ်နှင့် တော်လှန်ရေးအတွေးသစ်
ဒီထက်ပွင့်လင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် EAO တွေရှိပြီးသား နယ်စပ်ဒေသကို အခြေမခံပဲ သီးခြားလွတ်မြောက်နယ်မြေဖြစ်တာကြောင့် တော်လှန်ရေးကို အရှိန်မြှင့်တင်ဖို့ ပိုလွယ်ကူနိုင်ပါတယ်။ EAO တွေဟာ သူ့သဘာဝအရကိုက နေပြည်တော်သိမ်းရေး၊ ရန်ကုန်သိမ်းရေးအတွက်တိုက်နေတာမဟုတ်ပဲ သူ့ကိုယ်ပိုင်ဒေသ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တိုက်နေတာသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတွက် သူတို့နယ်ကို အခြေခံပြီး တိုက်ပွဲအရှိန်မြှင့်တဲ့အခါ ဆွေးနွေးသဘောတူညီချက်တွေ အများကြီးလုပ်နေရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကလည်း သဘာဝကျပါတယ်။ နေပြည်တော်သိမ်းရေးအတွက် သူတို့က ပူးပေါင်းတိုက်ပေးရင် ခင်ဗျားတို့ သူတို့ကို ဘာပြန်ပေးမှာလဲ...။ ဒါဟာ မတိုက်ခင်ကတည်းက ကြိုဆွေးနွေးသဘောတူထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။ ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေအတွက် ဆွေးနွေးမှုတွေဟာ အချိန်ယူရလေ့ရှိပါတယ်။
အရင်က နှစ် ၇၀ စာ အတွေ့အကြုံတွေ သူတို့မှာရှိပြီးသားဆိုတော့ အခုချိန်အထိ တုန့်ဆိုင်းဆိုင်းဖြစ်နေတာ၊ ၁၀၀% အထိ ပါမလာသေးတာတွေအပေါ် နားလည်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရတိုင်းလည်း ဖက်ဒရယ်ရတယ်လို့ မဆိုနိုင်ကြောင်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်တာ အတွင်း သူတို့သိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ စစ်အာဏာရှင်မပြုတ်မချင်း ဒီမိုကရေစီမရနိုင်သလို ဖက်ဒရယ်ကိုလည်း စိတ်ကူူးယဉ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီအတွက် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုနဲ့ ဖက်ဒရယ်အင်အာစု ၂ ခုပေါင်းပြီး ဒီတိုက်ပွဲမှာ လက်တွဲရမယ်ဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။
စစ်အုပ်စုပြုတ်ကျပြီးမှ ဆွေးနွေးရမယ့်ဟာတွေအတွက် အခုကတည်းက အချိန်ကုန်ခံ သိပ်ငြင်းမနေကြပဲ စစ်အုပ်စုပြုတ်ရေးကိုသာ အချိန်မီ (အချိန်အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်) တိုက်ပွဲအရှိန်မြှင့်ဖို့လိုနေပါတယ်။
ဆိုတော့... ဗိုလ်နဂါးတို့ ဒေသကိုသာ အကူညီတွေတိုးပေးပြီး လက်ရှိ လွတ်မြောက်ဒေသကို တဖြေးဖြေးချဲ့သွားမယ်၊ ခုခံစစ်ကနေ ထိုးစစ်ကို တက်သွားမယ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီဒေသဟာ နွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ ပထမ ဆုံးအောင်မြေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ စာရေးသူက ယူဆပါတယ်။
NUG တာဝန်ရှိသူတွေက ၂၀၂၂ အတွင်း တိုက်ပွဲအရှိန်မြှင့်မယ်။ ခုခံစစ်ကနေ ထိုးစစ်ဆင်တော့မယ်လို့ ပြောသံတွေလည်း ကြားလာနေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်ကြေညာလောက်တဲ့အထိ တိကျပြတ်သားတဲ့ Plan တော့ ထွက်မလာသေးပါဘူး။
(၄) ၂၀၂၂ အတွက် ဘာတွေပြင်ထားသလဲ...
လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဆိုတာ ရေရှည်သဘောကိုဆောင်တယ်။ ဒါပေမယ့် တဖက်မှာလည်း ရေရှည်ဖြစ်သွားရင် တဖက်ရန်သူက ပိုခိုင်သွားနိုင်တယ်၊ လူထုက ပိုနာလာတဲ့အတွက် တော်လှန်ရေး အီသွားနိုင်တယ်။ (အရင် ၈၈ အတွေ့အကြုံ ရှိခဲ့ဖူးပြီး)။
ဒါကြောင့် သွေးမအေးခင် တော်လှန်ရေးကို အရှိန်မြင့်ပြီး ဒီနှစ်ထဲမှာ အင်အားချိန်ခွင်လျှာ ပြောင်းလာတာကို မြင်ရတဲ့အထိ လုပ်ဖို့လိုနေပါတယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာ မလုပ်နိုင်ရင် တော်လှန်ရေး အီပြီး အရှိန်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။
NUG တာဝန်ရှိတွေက ၂၀၂၂ အတွင်း အောင်ပွဲရမယ်ပြောနေပြီး တပ်ပေါင်းစု NUCC ကို အရှိန်တင်လာတာလည်း တွေ့နေရပါတယ်။ တခါ EAO တွေဖက်က တဖြေးဖြေး တိုးပြီး ပါဝင်လာနေတာတွေ့ရပေမယ့် ၁၀၀% အထိ ပါဝင်လာတာ မတွေ့ရသေးပါ။
တချိန်တည်းမှာပဲ စစ်ကောင်စီ တပ်ဖက်ကလည်း တဦးစ နှစ်ဦးစ ထွက်ပြေးလာနေပေမယ့် အစုအပြုံလိုက် ပြိုဆင်း ထွက်ပြေးလာတာ မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဒါတွေကို ဒီနှစ် ထဲမှာ ပေါ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့လိုနေပါတယ်။
လမ်းပြမြေပုံကို မထုတ်ပြန်သေးဘူူးဆိုပေမယ့် EAO တွေနဲ့ NUG ကြားမှာ စနစ်တကျ ဆွေးနွေးပြင်ဆင်မှုတွေ ရှိနေတယ်၊ တရွေ့ရွေ့နဲ့ ရှေ့ကို ချီတက်နေတယ်ဆိုတာကတော့ နယ်စပ်သတင်းတွေအရ သိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအရှိန်ကို ဒီနှစ်အတွင်း၊ အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင် မိုးမကျမီ ကာလအတွင်း အစွမ်းကုန် မြှင့်တင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ သံတမန်ရေးတိုက်ပွဲ၊ ပြည်တွင်းက လူထု တိုက်ပွဲတွေကိုလည်း အချိန်ကိုက် မြှင့်တင်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။
ပြည်ပရှိ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖက်ဒရယ်လိုလားသူ ပြည်သူအားလုံးကလည်း အလှူငွေတွေကို ဒီထက်ပိုပေးအပ်ဖို့၊ လစဉ်ပုံမှန်ပေးနေတာအပြင် ဒီနှစ် ပထမ ၆ လအတွင်း ပုံအောပေးအပ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ ၈၈ ကအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားမို့ တော်လှန်ရေးကို အရှိန်ကောင်းတုန်းမှာ အားကုန် မောင်းနှင်ဖို့လိုပါတယ်။ အတိအကျ ပြောရမယ်ဆိုရင် ရှေ့နှစ် စစ်ကောင်စီကလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ အပြောင်းအလဲ တခုခုဖြစ်အောင် တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဖက်က ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခုလို အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း တာဝန်ယူထားသူတွေ တတိယ နိုင်ငံဆီ ထွက်သွားမိတာမျိုး၊ အချင်းချင်း ဝေဖန်ပုတ်ခတ်မှုတိုးလာတာမျိုးကို ရှောင်ဖို့လိုပါတယ်။
သဘောတရားတွေကို အွန်လိုင်းကနေ ဟောပြောနေတာအပြင် စစ်မြေပြင်အထိ ဆင်းဖို့၊ ရဲဘော်တွေနဲ့အတူ တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ အဲလို အရှိန်တင်ပြီး ဒီနှစ် ပွင့်လင်းရာသီမကုန်ခင်မှာ မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊ နယ်မြေသိမ်းပိုက်ရေးစစ်ပွဲဆင်နိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာအောင် အားလုံး လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖက်ဒရယ်လိုလားသူတိုင်း ဒီတိုက်ပွဲမှာ နိုင်တဲ့နေရာကနေ ပါဝင်ဖို့ လိုပါတယ်။ သတင်းသမားတွေပြောနေကြစကားလုံးအတိုင်း ပြောရမယ်ဆိုရင်... “အခွင့်အရေးဆိုတာ ၂ ခါ မရနိုင်ပါဘူး”။ ဒါကြောင့် အခုလို နှစ် ၇၀ မှာ တခါသာပေါ်တဲ့အခွင့်အရေးကို အင်အားစု အားလုံးက တညီတညွတ်တည်းနဲ့ အမိအရ အချိန်မီ အသုံးချဖို့လိုနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း တိုက်တွန်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Interview with Naing Htoo Aung of MOD-NUG. part-2
1:56 AM Htet Aung Kyaw No comments
“မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ ဆင်နိင်ဖို့ ကျနော်တို့ စနစ်တကျ ပြင်ဆင်နေပါတယ်”
(ဦးနိုင်ထူးအောင်- အတွင်းဝန်- NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန)
အခုနှစ်အတွင်း မြို့သိမ်း၊ နယ်မြေသိမ်းတိုက်ပွဲ ဆင်နွဲနိုင်ဖို့အတွက် စနစ်တကျ ပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အတွင်းဝန် ဦးနိုင်ထူးအောင်ကပြောပါတယ်။
ခုခံတော်လှန်စစ် တနှစ်ကြာလာပြီးတဲ့အခါမှာ ခုခံစစ်ကနေ ထိုးစစ်ကိုသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- PDF အင်အား တသိန်းခန့်ကို မောင်းပြန်သေနတ် ဘယ်လောက်တပ်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီလဲ...
- လက်နက်မပြည့်စုံတဲ့ကြားက မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ ဘယ်လိုဆင်နွဲမှာလဲ...
- ပြည်တွင်း-ပြည်ပက လူထုထောက်ခံမှု အရှိန်ကျမသွားအောင် NUG က ဘယ်လို ဆောင်ရွက်နေသလဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(ဒီနှစ်အတွင်း မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိ-မရှိ သုံးသပ်ချက်ပါဝင်မယ့် CDM ဗိုလ်ကြီးညီသုတနဲ့ မေးမြန်းချက်ကိုတော့ မနက်ဖန်ညမှာ ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်)။
Interview with Naing Htoo Aung of MOD-NUG. Part-1
“လက်နက်အကန့်အသတ်ရှိနေပေမယ့် စစ်ပညာသင်တန်းဆင်းပြီးသား PDF ကတော့ သိန်းဂဏန်းအထိရှိလာနေပါပြီ”
လက်နက်တပ်ဆင်ရေး အကန့်အသတ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပေမယ့် အခြေခံစစ်သင်တန်းဆင်းပြီးသား၊ တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF အင်အားကတော့ သိန်းဂဏန်းအထိရှိလာနေပြီဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အတွင်းဝန် ဦးနိုင်ထူးအောင်ကပြောပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းမှုတနှစ်ပြည့် သို့မဟုတ် နွေဦးတော်လှန်ရေးတနှစ်ပြည့်ကာလအတွင်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- နွေဦးတော်လှန်ရေး တနှစ်တာကာလအတွင်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ...
- PDF, LDF, ပကဖ တွေအပေါ် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်စီးဆင်းနေပြီလား...
- NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ EAO တပ်တွေကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေက ဘယ်လောက်အထိ တိုးတက်လာနေပြီလဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(ခုခံစစ်ကနေ ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အထိ လုပ်နိုင်အောင် ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းပါဝင်တဲ့ ဒုတိယ ပိုင်းကိုတော့ မနက်ဖန်ညမှာ ဆက်လက် ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်)။